Akwụkwọ 10 kachasị mma site n'aka Gabriel García Márquez | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Akwụkwọ 10 kachasị mma site n'aka Gabriel García Márquez
N’agbanyeghi na ihe kariri afo ato gara aga ka onwuru, uwa echefughi Gabo ... ma oli. Site na Aracataca, Colombia, obodo nke biara n'okpuru njirimara nke ndi a ma ama Macondo site na Narị Afọ nke NanịGabriel García Márquez (Machị 6, 1927) bụ onye edemede kachasị akwụkwọ akwụkwọ Spanish America mepụtara. Ndị a Akwụkwọ 10 kacha mma nke Gabriel García Márquez gosi anwansi nke ọlu nke nna nke ezigbo anwansi na onye mmeri nke NobeOnye were ikike ya ịkọwa otu kọntinenti duhie anyị, jikọta eziokwu na echiche efu wee gbanwee akụkọ ya ka ọ bụrụ oge na-adịghị.
1 Afọ isii nke owu ọmụma
2 Ima ima ke ini udọn̄ọ
3 E Buru n'Amụba Banyere Ọnwụ
4 Onyeisi ndị agha enweghị onye ọ ga-edegara ya
6 Akụkọ banyere ụzọ awara
7 Oge mgbụsị akwụkwọ nke Onyeisi Chọọchị
8 Ihe ncheta nke nwanyi obula
9 Akụkọ Ifo nke iri na abụọ
10 Ndụ ịgwa
Afọ isii nke owu ọmụma
Otu narị afọ nke ịnọ naanị ya ...
Gabo ghotara ya na otu n'ime oge akụ na ụba ya kacha njọ, enweghị ike onye edemede ahụ na-achọpụta na ọrụ ya, mgbe ezigara ya onye nkwusa Argentina bụ Sudamericana na 1967, ga-abụ ihe ịga nke ọma na-enweghị mgbagha. Akụkọ banyere ezinụlọ Buendía, onye bi na obodo Macondo furu efu, abughi na o bu akuko banyere Latin America n'ime otutu ọgbọ, kama iji nweta ugha nke ihe anwansi nke mejuputara n'oge 60s na 70s ka o buru uzo isi nke akwukwo ozi nke Ibero-American. N'ime akwụkwọ 10 kachasị mma site n'aka Gabriel García Márquez nke a bụ nnukwu ọrụ ya, na-enweghị mgbagha.
Ima ima ke ini udọn̄ọ
N'ihe karịrị otu oge, Gabo kwetara na Hụnanya n'oge ọgbụgbọ ọgbụgbọ bụ akwụkwọ kacha amasị ya. Otu n’ime ihe kpatara ya bụ na akụkọ banyere nne na nna nke onye dere ya bụ isi iyi nke mkpali maka ịhụnanya nke Fermina Daza, lụrụ dọkịta Juvenal Urbino, na onye naanị ya bụ Florentino Ariza n’obodo ọdụ ụgbọ mmiri dị na Caribbean Colombia. N'ịbụ nke mepụtara n'oge ndụ nke ndị dike atọ ahụ, Lovehụnanya na Oge nke Cholero dị ka nwayọ nwayọ, nke na-emikpu gị n'echiche nke ndị edemede maka oge bụ naanị olileanya. E bipụtara na 1985, akwụkwọ akụkọ ahụ nwere ihe ịga nke ọma na (otu) kwesịrị mmegharị ihe nkiri emere na 2007.
E Buru n'Amụba Banyere Ọnwụ
Akwụkwọ nke ọnwụ ...
Site na peeji nke mbụ ị maraworị njedebe, mana nko ahụ bụ ịmara otu mpempe ihe mgbagwoju anya nke dugara n'ọnwụ Santiago Nasar dabara, nke accusedngela Vicario boro ebubo, onye lụrụ dọkịta na-adịbeghị anya Bayardo San Román, nke ịbụ ihe kpatara ọnwụ nwa agbọghọ ya. Akụkọ mpụ nke onye ọ bụla maara ma ọ nweghị onye nwara ịkwụsị ya dị nso na akwụkwọ akụkọ nyocha ma nata mmetụta dị iche iche site na Gabo ọzọ. E bipụtara na 1981, Akwụkwọ bu amụma banyere ọnwụ Ọ na-esite n'ike mmụọ nsọ n'ezie nke nwoke e gburu egbu na obodo Colombia na 1951.
Onyeisi ndị agha enweghị onye ọ ga-edegara ya
Kornel enweghị onye ...
Akwụkwọ nke abụọ García Márquez bipụtara bụ akwụkwọ akụkọ a dị mkpirikpi nke, n'agbanyeghị ogologo ya, nwere akụkọ siri ike dịka ọ dị aghụghọ. Onye ozo, onye colonel nke na-aga n'ọdụ ụgbọ mmiri kwa ụtụtụ na-eche ụgwọ ezumike nká ya maka ọrụ ya na Puku Afọ Agha, na-agagharị n'okporo ámá nke obodo Colombia, na-emeso nwunye ya ma gbalịa ịzụrụ ọkpa ọgụ nke onye ọ nwụrụ anwụ. n'etiti ịda ogbenye na-eto eto. E bipụtara akwụkwọ akụkọ ahụ na 1961 na Gabo weere ya "akwụkwọ ya kachasị mma".
Akwụkwọ mbụ nke Gabo bipụtara na-enyeworị ihe ngosi nke ndị odide, ọnọdụ na obodo nke Macondo nke a ga-amata mgbe ebipụtara otu narị afọ nke ịnọrọ onwe ya. Akwụkwọ edemede dị mkpirikpi nke gụnyere echiche atọ nke ezinụlọ (nke nna bu onye isi, nwa ya nwanyi na nwa nwa ya) banyere olili nke mmadu nile ndi mmadu choro. N'ime ọrụ a, Gabo na-egosipụtakwa oge ya na atụmatụ ndị ọzọ nke anwansi iji mee ka ọ bụrụ ntụle zuru oke na akwụkwọ ndị ọzọ ya.
Akụkọ banyere ụzọ awara
Akụkọ nke castaway ...
Ọrụ ode akwụkwọ kachasị dee akwụkwọ bụ mgbe ọnwa ole na ole nyochachara n'ime otu ihe omume dị egwu nke wutere ndị Colombia niile. Luis Alejandro Velasco Ọ banyere Mobile, Alabama (United States), n'ụgbọ mmiri Caldas, nke mebiri, na-amanye ya ka ọ nọrọ ụbọchị iri n'oké osimiri na-enweghị nri na ebere nke atụmatụ nke ọpụpụ banyere oge ụgbọ elu nnapụta ga-abịa. Akụkọ a kpughere ahia ahia ahia mba abụọ, na-ama ikpe iji chefuo otu nwoke onye Colombia nke akụkọ ya gbanwere akụkọ ya na Gabo na 1970.
Oge mgbụsị akwụkwọ nke Onyeisi Chọọchị
Oge mgbụsị akwụkwọ nke Onye isi ala ...
Onu ogugu nke onye ochichi aka ike na Latin America bu ihe ederede ederede dika ndi Gabo bu ndi ozo n’akwukwo a. Dika akwukwo akuko, nke otutu olu ndi mmadu na-agha dika echiche nke Onye isi ochichi obi ojoo, edeputara akwukwo a na 1975 ma o yighi ka Fidel Castro, ezigbo enyi Gabo.
Ihe ncheta nke nwanyi obula
Na ebe nchekwa nke m akwụna ...
Akwụkwọ akụkọ ikpeazụ site n'aka Gabriel García Márquez, nke e bipụtara na 2004, kpatara ụfọdụ esemokwu mgbe oge a tọhapụrụ ya nyere atụmatụ nke o gosipụtara: akụkọ ịhụnanya n'etiti onye odeakụkọ merela agadi bụ onye kpebiri inye onwe ya dị ka onyinye ụbọchị ọmụmụ 90th n'abalị nke agụụ mmekọahụ na-eto eto na-arụ ọrụ nke kpebiri ire nwa agbọghọ ya na-amaghị nwoke iji chebe ezinụlọ ya. Mmegbu nke ike, owu na ọnwụ, atọ n'ime isiokwu kachasị amasị Gabo, jikọtara na akụkọ a na obodo Barranquilla n'etiti narị afọ nke iri abụọ na nke ihe nkiri ya hụrụ ìhè na 2012.
Akụkọ Ifo nke iri na abụọ
Akụkọ Ifo nke iri na abụọ ...
Gabo bụ ezigbo onye ode akwụkwọ mana, karịa ihe niile, onye na-ede akụkọ dị mkpirikpi, ụdị ọtụtụ ndị dere Latin American magical realism. Otu n'ime ezigbo ihe atụ bụ nchịkọta nke akụkọ iri na abụọ na-ekwu okwu akụkọ banyere ndị odide Latin America dị iche iche na mpaghara Europe: site na onye isi ala ochie a dọọrọ n'agha gaa na onye nlekọta German nke na-elekọta ụmụ nke di na nwunye Colombia, akụkọ akụkọ a dị mkpirikpi gbawara na ihe bụ akụkọ kachasị amasị m site n'aka onye edemede Colombia, Nzọụkwụ gị nke ọbara na snow, Onye njedebe na-agbawa obi na-akọwapụta ntụgharị dị oke mkpa na ụdị dị ka obere akụkọ.
Ndụ ịgwa ...
Mgbe Gabo nwusiri, uwa jiri oke ịnụ ọkụ wee tụgharịa na ọrụ a, akụkọ ọdịnala nke onye ode akwụkwọ kewara ụzọ atọ na nke nyeere aka ịghọta ụwa edemede ya karịa nke ọma. N’ime ibe ya niile, Gabriel García Márquez na-ekwu maka akụkọ nne nne ya gwara ya, maka etu o siri metụta nnukwu arụrụala gọọmentị US na mpaghara Latin America ma ọ bụ nkwupụta ịlụ di na nwunye nwunye ya, Mercedes Barcha, ịhụnanya maka ndụ ya. E bipụtara akwụkwọ ahụ na 2002.
Kedu ihe, n'uche gị, akwụkwọ 10 kacha mma Gabriel García Márquez ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ 10 kachasị mma site n'aka Gabriel García Márquez
A ga-achịkọta akwụkwọ ọgụgụ Gabo niile na Nrite Nobel o nwetere.Ma, ọrụ abụọ na-emezu atụmanya: Otu narị afọ nke ịnọrọ onwe onye.
Zaghachi Victor Linares.
Enwere m mmasị na edemede nke GGM, ọ dị m ka ya bụrụ ihe ebighi ebi ka m wee ghara ịkwụsị ide ma nwee ike ịnụ ụtọ ya n'oge ọ bụla site na iji ihe ọhụụ
Onye Venezuelan Arturo Uslar Pietri webatara okwu a bụ eziokwu anwansi na akwụkwọ Latin America. E nwere ọtụtụ ndị gosipụtara echiche ha site n'ụdị a, ma ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha na Uslar Pietri bụ NNA nke avant-garde a na-ede akwụkwọ nakwa na ọ na-enye ndụ okwu ahụ n'ezie eziokwu na ọrụ ya Las Lanzas Coloradas nke e bipụtara na 1930 setịpụrụ na Venezuelan. oge colonial.. Site n'ịkwanyere Gabriel G. Marquez na nnukwu akwụkwọ akụkọ ya. Mana ọ bụghị akụkọ ihe mere eme nke ọma iji nweta Marquez okwu nna nke eziokwu anwansi
2017. My nwa itule nke Yankees, Vikings, anstali, Gauls na nationals
Ị maara...? Christmas na akwụkwọ ...